नेकपाले फागुन ८ गते यसकारण गर्दैछ बन्द, विज्ञप्तिसहित हेर्नुहोस् — Sanchar Kendra
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन ८ गते लुम्बिनी बन्दको आव्हान गरेका छन् । नेकपा लुम्बिनी ब्युरो इन्चार्ज वीरजंगले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारको धरपकड, गिरफ्तारी र दमनबिरुद्ध बन्द आव्हान गरिएको बताएका छन् ।
देशभर आफ्नो अभियानलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाइरहेको नेकपामाथि सरकारले बिगतदेखि नै दमन गर्दै आएको छ । नेकपाले भने सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यसअघि बुधबार मात्रै नेकपा महासचिव विप्लवले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा एक सबैलाई एकीकृत जनक्रान्तिमा हातेमालो गर्न पनि अपिल गरेका थिए ।
यस्तै चुनाव खारेज अभियानदेखि नै राज्यसँग भयङ्कर ठूलो लडाइँ परेको महासचिव विप्लवले बताएका छन्। तर पछिल्लो समयमा एघारबाह्र महिनाको केपी–प्रचण्डहरूको असफलतापछि एकचोटि सत्तापरिवर्तन गर्ने नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भने हेर्नुपर्छ र साथ दिनुपर्छ भन्नेमा जनता पुगेको उनको दावी छ ।
यस्तो छ महासचिव विप्लवको भनाइ जस्तो तस्तै
‘एउटा समय थियो राणाका विरुद्ध जनताले राजालाई पनि साथ दिए । फेरि समय आयो काङ्ग्रेसको सट्टामा एमालेलाई पनि साथ थिए । एमाले र काङ्ग्रेसको सट्टामा माओवादीलाई पनि साथ थिए । यी सबै घटनाक्रमले के साबित गरेको छ भने जनताले एउटा स्थिर र नयाँ जीवन खोजिरहेका छन् । तर गएगुज्रेको, उत्पीडनमा परेको, दमनमा परेको, हस्तक्षेपमा परेको जीवन होइन, मुक्त, स्वतन्त्र, स्वाधीन जीवन खोजिराखेका छन् ।
नहुनुको कारणलेयहीँ अवरुद्ध भइरहेको छ । त्यसकारण पहिलो आधार के हो भने यो सत्तालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ है भन्दानेपाली जनतातयार हुने एउटा परिस्थिति छ । पहिलो आधार यो हो । किनभने उनीहरू नयाँ जीवन चाहन्छन् । दोस्रो आधार के हो भने जनताले चाहेर मात्रै त हुँदैन, त्यसलाई नेतृत्व दिनेदृष्टिकोण चाहिन्छ । संस्था चाहिन्छ र पार्टी चाहिन्छ । त्यस हिसाबले नेपालमा यसको पनि अहिले अभाव छैन । पहिलेएकचोटि एकदम प्रचण्ड–बाबुरामहरू संसदीय व्यवस्थामा फर्किसकेपछि त सबै मान्छेलाई एउटा बडो ठूलो भ्रमजस्तो पनि भयो ।
अथवा एकदमै अविश्वास, आशङ्का र निराशाजस्तो पनि छाउन खोज्यो । तर तपाईंहामीले जुन सङ्घर्ष ग¥यौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी सङ्घर्ष छे¥यो । चाहे पार्टीभित्र प्रचण्ड–बाबुरामहरूको विचलनका विरुद्ध होस्, चाहे बाहिर काङ्ग्रेस र अरू शक्तिहरूले माओवादी आन्दोलनलाई सिध्याउनकालागि खेलेको खेलका विरुद्धहामीले विद्रोह ग¥यौँ ।
एकीकृत जनक्रान्ति यो शताब्दीको एउटा नयाँ विचारका रूपमा विकास हुनसक्छ किनकि यसले एउटा नयाँ ब्याख्यासहित उएटा चाहिँ समाजवादमा लान खोजेको छ । समाजवाद पहिले मजदुरको मात्रै, किसानको मात्रै तेसो होइन, समाजवाद भनेको त चेतना र श्रमको अभिब्यक्ति हो । चेतना र श्रम मिलेर प्राप्त हुने एउटा व्यवस्था हो । सभ्य समाज हो नि त । त्यसकारण एउटा श्रमबाट मात्रैव्याख्या गर्नु हुँदैन । चेतनाबाट मात्रै होइन,चेतना र श्रमलाई एकठाउँमा ल्याउँदा वास्तविक एउटा वैज्ञानिक समाजवाद बन्छ भन्ने भएपछि एउटा यो बन्न सक्छ, यसले ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनमुक्ति सेना निर्माण गर्दैछ । यहाँ आएर भाग लिनुप¥यो । अब क्रान्तिमा सहभागी बन्न आउनुप¥यो । अनि केको पीडा ? क्रान्ति त एउटा निरन्तर जीवनको प्रक्रिया हो नि ! जीवन रहुन्जेलसम्म, समाज रहुन्जेलसम्म, साम्यवाद नआउन्जेलसम्म पुँजीवादका विरुद्ध कम्युनिस्टहरूले क्रान्ति छेडिरहनुप¥यो नि । त्यसकारण हामी हिजो थियौँ । दुःख ग¥यौँ । त्यहाँ हामीलाई अलिकति पैसा देऊ । हामीलाई अलिकति सुविधा देऊ भनेर भिक माग्न, रुनकराउन जरुरत नै छैन । पूरा गौरवकासाथ इतिहासमा गरेका योगदानमा गर्व गर्दै नयाँ एउटा इतिहासको निर्माणमा जिम्मेवारीबोधकासाथ जुटौँ। यो हाम्रो कुरा हो ।’